UFariña. Imbali kunye nokungaziphathi ngokurhweba ngeziyobisi eGalicia | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | | Uvavanyo, Ababhali, Iincwadi
Incwadi ye UFariña. Imbali kunye nokungaziphathi ngokurhweba ngeziyobisi eGalicia, sesinye sezihloko ekuphikiswana ngazo kwiminyaka yakutshanje eSpain. Ngokukodwa emva kokukhutshwa komyalelo wenkundla ngo-Matshi 2018 eyalela ukuba kumiswe ukuthengiswa kwayo. Isizathu: ulwaphulo-mthetho lokutyholwa kwelungelo lokuhlonipha omnye wabantu abakhankanyiweyo kwisicatshulwa.
Kwimeko nayiphi na into, ukubonelelwa kwarhoxiswa kwiinyanga ezine kamva. Ngokwenyani, ityala linike igalelo (nangaphezulu) kwimpumelelo yokuhlela ye UFarina, idlula iikopi ezili-100.000 XNUMX ezithengisiweyo ukuza kuthi ga ngoku. Ngokunjalo, le ncwadi ngumbhali weendaba waseSpain uNacho Carretero sisiseko sebali lothotho UFarina, Iphehlelelwe nguMovistar Plus ngoSeptemba 2019.
1.1 Isimo esisemthethweni sencwadi kaFariña
2 Umxholo wembali wokuthutyeleziswa eGalicia
2.1 Indlela yokuphila "egwetyelweyo"
3 Incwadi kaFariña ityhila ingxaki yenkcubeko
3.2 "ISicily entsha"
3.3 Ubuntatheli obuphezulu
4 Umnxeba wokuvuka onamandla kuluntu lwaseSpain
UNacho Carretero (A Coruña, 1981) yintatheli kunye nombhali onomsebenzi omde. Ngaphandle kophando lwakhe ngokurhweba ngokuthengisa iziyobisi eGalicia, uCarretero ugqibezele iingxelo ezothusayo malunga nokubulawa kwabantu eRwanda, i-Ebola e-Afrika, imfazwe yamakhaya yaseSyria kunye nemililo yamahlathi eGalicia ngo-2017.
Isimo esisemthethweni sencwadi kaFariña
Phakathi kuka-Matshi noJuni ngo-2018, "ukuthimba ukuthintela" eyalelwe nguJaji Alejandra Fontana kwakusebenza, ngokwesicelo sikaJosé Alfredo Bea Gondar, owayesakuba ngusodolophu wase-O Grove (Pontevedra). Inkqubo yayiyinxalenye yesimangalo sakhe nxamnye noNacho Carretero kunye nenkampani iLibros del KO. Ukongeza, ummangali ubanga imbuyekezo ye- € 500.000, esongelayo ukusinda komshicileli.
Nangona kunjalo, Nge-22 kaJuni, i-2018, iNkundla yePhondo yaseMadrid irhoxise ukuyeka urhwebo. Nokuba kwenzeka ntoni le ncwadi iyakuhlala inempikiswano kwaye ingonwabisi. Igama "fariña" lithetha "umgubo" ngesiGalician (enye yeendlela eziqhelekileyo zokubhekisa kwi-cocaine). Isikhuselo sikwabhengezo senjongo: silinganisa inyanda evulekileyo yeziyobisi.
Ezinye iincwadi zikaNacho Carretero (zombini zikhutshwe ngo-2018):
Kubonakala kungcono kuthi (ILibros del KO), apho enza uphononongo lwembali kwaye athethe nengxaki yezemidlalo kunye neziko laseDeportivo de La Coruña.
Kumgca wokufa (Inqaku lomhleli uEppasa), ebhekisa kwityala likaPablo Ibar, umSpaniard wagwetyelwa ukufa e-United States ngo-2000. Kodwa ngo-2016 iNkundla ePhakamileyo yaseFlorida yagqiba kwelokuba ayinalo ityala elifanelekileyo, oko kukuthi, kufuneka liphindwe.
Umxholo wembali wokuthutyeleziswa eGalicia
Indawo ezingenakubalwa ezifihliweyo, iindlela zamanzi ezinobunzima kunye neenoksi, zenza Galicia Ingingqi efanelekileyo yamaqela okuthubelezisa ukuze achume. Nasiphi na isaphuli-mthetho esinolwazi olwaneleyo lwendawo sinethuba elihle lokufihla kwaye sisinde. Kule meko, uCarretero wagqiba ubalo maxesha olugqwesileyo kwisithethe esasekwa kwiinkulungwane ezininzi.
Indlela yokuphila "egwetyelweyo"
Ukutyeshelwa ngokwembali ngabasemagunyeni kurhulumente kudale iimeko ezifanelekileyo zokuhlawula amatyala okuthutyeleziswa ukuze achume. Ngesi sizathu, ukurhweba ngabantu ngokungekho mthethweni kuphela - kuye kwabonwa kakuhle kunxweme lwaseGalician. Ibonwa njengenye indlela yokufumana imali.
Abo babandakanyekayo bahlala bezithethelela ngezenzo zabo ngokuthi "imisebenzi yabo ayenzakalisi mntu". Bacinga ukuthutyeleziswa njenge "ruble" eqhuba amanye amacandelo ezoqoqosho, "ishishini elininzi, utyalo-mali oluninzi, umsebenzi omninzi kuye wonke umntu". Ke ukugcwala okuqale ngeebhayisikile phakathi kwinkulungwane ye-70 kwaye kwaqhubeka ngecuba kwiminyaka ye-80, kwakhokelela kwiziyobisi phakathi kweminyaka yama-90 kunye nama-XNUMX.
Incwadi ye UFarina ubungqina bengxaki yenkcubeko
Ungayithenga le ncwadi apha: UFarina
"Ukugcwala kwabantu akuchaphazeli abemi beli" libinzana eliphindaphindwayo ukugubungela intlekele elandelayo. Kukuxolisa okusekwe kumazwe apho kulinywa khona kwaye kulungiswa izityalo ezifana negqabi lecoca okanye intsangu kuqhelekile. Okwangoku, ubungqina obufunyenwe kumakhoboka eziyobisi eGalicia abaluleke kakhulu.
Ngokungena kwingxaki yokulutha iziyobisi kuloo mmandla, UCarretero uyichitha ngokupheleleyo intsomi "yokusetyenziswa okwenzeka kwenye indawo". Kodwa izizathu ezinemilenze emifutshane asizozonxibelelwano kuphela kunye namazwe avelisa iziyobisi. Ewe, unxibelelwano kunye neenqwelomoya zase Mzantsi Melika-ubukhulu becala noPablo Escobar's-beziluqilima.
Ngokucacileyo, ukusekwa kwenethiwekhi enkulu yokuthengisa iziyobisi kufuna ukungakwazi ukusebenza kunye / okanye ukubanzima kwabasemagunyeni. Abezopolitiko, amapolisa, ezomkhosi ... ukuya kwinqanaba elincinci okanye elincinci, bonke banesabelo sabo kuxanduva. Ngaphandle koko, izindlu zolwaphulo-mthetho bezingenakuba nayo indawo. Ngaphezu koko, iCarretero ayikhupheli ngaphandle uluntu lwaseGalician njengenxalenye yengxaki.
Quote nguNacho Carretero. eFariña.
Ke ngoko, uphando luphele ngokuhlutha ikhonkco ngalinye kwintengiso yeziyobisi eGalicia. Ke, abaninzi, abantu abaninzi abaqhele ukungohlwaywa baphela "bachitheka". Ngapha koko, isimangalo esamkelweyo sisiphumo "esiqhelekileyo"; okuninzi akunakulindeleka ukuba kuvele kwikamva elingekude kakhulu.
UCarretero (kunye nompapashi) babonakalise ubukhalipha babo ngokwenza umsebenzi onobungozi njengoko kufuneka. En UFarina izibhengezo ze-capos, amapolisa, iijaji, intatheli kunye nabemi basekuhlaleni bavela ezibonisa isigxina sengxaki yokuthengisa iziyobisi kude kube namhlanje.
Kwelinye icala, ulwazi lubonakala luhlelwe kakuhle, oluququzelela ukuqonda kobungakanani bezithuthi kunye nemiphetho yazo. Kwakhona, lI-infographic ibonelela ngedatha ethembekileyo kwizindlu, iindlela, kunye neendlela zothutho. Eyona nto inomtsalane ziinkcukacha kwii-macro-glider ezisetyenziselwa ukuhambisa imithwalo kunqamle imilambo.
Umnxeba wokuvuka onamandla kuluntu lwaseSpain
Imithombo yeendaba e-audiovisual ngokuyinxenye inetyala lokuvelisa uvelwano kubantu abakhulu baseMexico okanye baseColombia abathengisi beziyobisi. Namhlanje, kwiinethiwekhi ezinjengeNetflix okanye iFox, uthotho lukamabonwakude olujolise kwaba bantu baqhelekileyo kwaye luyimpumelelo. Ke, UCarretero uyenza icace into yokuba abantu abaqhelekileyo bayamthanda umrhwebi weziyobisi yingxaki enkulu.
Abantu baseSpain bahlala bezithatha iindaba zongquzulwano phakathi kwemigulukudu.. Kwenzeka into efanayo kunye neenkcukacha ezothusayo zokusetyenziswa. Xa inyani yahluke kakhulu, "banesilo ekhaya." Ukongeza, inxulunyaniswa nothotho lwamashwa anje ngokurhweba ngabantu, urhwaphilizo kunye nokuhla komgangatho woluntu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iintlobo » Uvavanyo » Incwadi kaFariña
Iincwadi zikaJohanna Lindsey
UJosé Ramón Gómez Cabezas: «Ukoyisa umfundi kukukhwela i-Everest»